Ma jiro baasaboorada COVID-19, ma jiraan qufulka Kirismaska ​​ee Great Britain
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Ma jiro baasaboorada COVID-19, ma jiraan qufulka Kirismaska ​​ee Great Britain
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Xuquuqda Aadanaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Nin ku dheggan calanka Denmark ayaa istaagay Fagaaraha Amalienborg Palace, halkaas oo dadku ku heesayeen si ay u xusaan sannad -guuradii 80 -aad ee Boqoradda Denmark Margrethe II, ee Copenhagen, Abriil 16, 2020. - Dadka waddanka oo dhan ayaa ka heesi kara balakoonnada, daaqadaha , jardiinooyinka ama shaqada. Dabaaldegga dhalashada Boqoradda Margrethe ee 80 sano ayaa la baajiyay COVID-19, cabsi laga qabo caabuqa coronavirus. (Sawirka Niels Christian Vilmann / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT (Sawirka NIELS CHRISTIAN VILMANN / Ritzau Scanpix / AFP via Getty Images)
Wasiirka Caafimaadka Ingiriiska Sajid Javid ayaa u sheegay BBC -da martida loo yahay Nick Robinson in dib -u -eegis lagu sameeyay arrintaas, aysan dowladdu filaynin inay xirnaato mar kale inta lagu jiro xilliga fasaxa - si ka duwan sidii sannadkii hore markii qoysaska UK oo dhan loo sheegay inay kala fogaadaan oo u dabbaaldegaan shiidaa.
Wasiirka UK ayaa ku dhawaaqay inuusan jirin Baasaboor COVID-19 oo loogu talagalay dadka Ingiriiska.
Fasaxyada ciidaha Kirismaska ​​lagama yaabo inay ka dhacdo UK, ayuu yiri wasiirku.
66% dadka deggan UK si buuxda ayaa loo tallaaley hadda.
Intii lagu jiray muuqaalkii shalay ee barnaamijka BBC, Wasiirka Caafimaadka UK Sajid Javid wuxuu sheegay in dowladda Ingiriiska aysan soo bandhigi doonin baasaboorada COVID-19 iyo in dadka Ingiriiska ah ay "heli doonaan Kirismaska" sannadkan.
Wasiirka caafimaadka Javid ayaa u sheegay martida BBC Nick Robinson in dib -u -eegis arrinta ku saabsan, dawladdu aysan filaynin xirmooyin dambe inta lagu jiro xilliga fasaxa - si ka duwan sanadkii hore markii qoysaska ku nool UK oo dhan loo sheegay inay kala fogaadaan maalmaha fasaxa iyo dabaaldegga dhab ahaan.
Javid wuxuu shaaca ka qaaday inuusan "fileynin xirnaansho dambe" inta lagu jiro xilliga dayrta iyo xilliga jiilaalka, isagoo ku andacoonaya inuusan arki karin sida aan ku tagno xiritaan kale. Wasiirka ayaa raaciyay, si kastaba ha noqotee, inay "mas'uuliyad darro noqon doonto in wasiir kasta oo caafimaad oo adduunka ah uu wax walba miiska ka saaro."
British Wasiirka Caafimaadka Javid ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in dowladdu ay ka tanaasuli doonto qorshihii ay ku soo bandhigi lahayd guri Baasaboorka tallaalka COVID-19, ugu yaraan waqtiga.
Javid wuxuu ku dooday, "Ma aha inaan wax u qabanno annaga aawadood ama kuwa kale ayaa samaynaya," ayuu yiri Javid oo ku dooday, "in dadka intooda badan aysan dareen ahaan jeclayn fikradda" ee ah inay muujiyaan dukumentiyo si ay u qabtaan hawl maalmeedka.
"Waxa aan dhihi karo waa inaan si fiican u eegnay, in kasta oo ay tahay inaan ku hayno kayd ahaan ikhtiyaar suurtagal ah, waan ku faraxsanahay inaan dhaho ma sii wadayn doonno qorshayaasha baasaboorada tallaalka," ayuu yidhi .
Ka dib markii marti-geliyihii BBC-da uu tilmaamay in dhowr wasiir-oo uu ku jiro wasiirka tallaalka COVID-19, Nadhim Zahawi-ay dhaheen dhowr maalmood ka hor in baasaboorada tallaalka la hirgelin doono mustaqbalka dhow iyo inay tahay wax sax ah in la sameeyo, Javid wuu diiday soo jeedin ah in mar kale ay dhacday iyada oo laga jawaabayo fallaagada, ka-hortagga xaddidaadda Xildhibaannada Xisbiga Conservative-ka.
"Dalal badan markii ay hirgeliyeen waxay ahayd inay isku dayaan inay sare u qaadaan heerka tallaalkooda waadna fahmi kartaa sababta ay sidaas u yeeli lahaayeen," ayuu Javid sharxay. "Aad ayaan ugu guuleysannay heerarka tallaalka illaa hadda."
Waxaa UK ku sugan 43.89 milyan oo qof oo si buuxda looga tallaalay COVID-19, halka 48 milyan ay heleen ugu yaraan hal qiyaas, sida ku cad tirakoobka dowladda.
Sida laga soo xigtay xogtii ugu dambeysay, 66% Boqortooyada Midowday si buuxda ayaa loo tallaaley, taasoo ka dhigaysa waddanka 17aad ee guud ahaan la tallaalay.